Ajụjụ - Shenzhen bun nkenke Co., Ltd.
Angular Contact Ball biarin (ACBB)
Deep uzo Ball agba (DGBB)
Special Series m
Ihe Nlereanya nke nwụnye
Ihe Nlereanya nke Wụnye a Square Type Support Unit
Now Type Support Unit
Ihe Nlereanya nke Wụnye a Gburugburu Type Support Unit
Olee otú na-eji
Structure na atụmatụ
The Support Unit abịa na isii na ụdị: ụdị ek, FK, EF, na FF, nke na-etozu maka ọkọlọtọ-ngwaahịa Ball kposara nyere na okokụre aro agwụ, na ụdị BK na BF, nke na-etozu maka bọl kposara n'ozuzu.
The Support Unit na ofu akụkụ nwere a JIS Class 5-Dabara angular amị nyere na a gbaziri agbazi preload. The miniature ụdị Support Unit ụdị ek / FK 4, 5, 6 na 8, akpan akpan, ekwukwa a miniature amị na a na kọntaktị na n'akuku nke 45゜mepụtara nanị maka miniature
Ball kposara. Nke a na-enye anụ adiana arụmọrụ na elu rigidity na izi ezi.
The Support Unit na-akwado n'akụkụ eji a miri-uzo bọl amị.
The esịtidem biarin nke Support Unit ụdị ek, FK na BK nwere ihe kwesịrị ekwesị ego lithium ncha-otu griiz na-anọkwasị na a pụrụ iche akara. N'ihi ya, ndị a ụdị ndị ruru eru nke na-arụ ọrụ ruo ogologo oge.
Eji Ezigbo agba
Iji hụ na rigidity itule na Ball ịghasa, na Nkwado Unit na-eji ihe angular amị (kọntaktị n'akuku: 30 ゜; DF nhazi) na elu rigidity na ala torque. Miniature Support Unit ụdị ek / FK 4, 5, 6 na 8 na-webatara na a miniature angular amị na a na kọntaktị na n'akuku nke 45 ゜ mepụtara nanị maka miniature Ball kposara. Nke a na-amị nwere a ukwuu kọntaktị n'akuku nke 45 ゜ na ọnụ ọgụgụ ka elu nke bọọlụ na a nta n'obosara. The elu rigidity na izi ezi nke miniature angular amị na-enye anụ adiana arụmọrụ.
Nkwado Unit akpụzi
Square na gburugburu shapes dị maka Nkwado Unit na-ekwe ka nhọrọ dị ka bu n'obi iji.
Kọmpat na Easy nwụnye
The Support Unit na-compactly iji nabata na ohere echichi na saịtị. Dị ka na-amị na-nyere na ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị gbanwee preload, na Nkwado Unit nwere ike kpọkọta na a Ball ịghasa unit na dịghị ihe ọzọ machining. N'ihi ya, achọrọ nwoke-awa na nzukọ nwere ike belata nzukọ ziri ezi nwere ike mụbara.
Wụnye Support Unit
① Wụnye ofu-n'akụkụ Support Unit na ịghasa aro.
② Mgbe inserting ofu-n'akụkụ Support Unit, nọrọ ná nchebe na mkpọchi nut iji kpọgide set mpempe
na hegzagon anya setscrews.
③ Gbakwunye akwado na-n'akụkụ na-amị na ịghasa aro ma nọrọ ná nchebe na-amị na iji snap
mgbanaka, ma wụnye nzukọ a na-ụlọ na-akwado n'akụkụ.
Rịba ama 1: Ị dịghị disassemble na Nkwado Unit.
Rịba ama 2: Mgbe inserting ịghasa aro na Nkwado Unit, na-elekọta agaghị ekwe ka mmanụ akara egbugbere ọnụ atụgharị eyi.
Note 3: Mgbe ichebe ndị set mpempe na a hegzagon anya ịghasa, tinye ihe nyagide na hegzagon anya ịghasa tupu
tightening ya iji gbochie ịghasa si echikwapụ. Ọ bụrụ na-eme atụmatụ iji ngwaahịa na a siri ike obibi, ọ bụ
dịkwa mkpa ime ihe ụfọdụ iji gbochie ndị ọzọ mmiri / akụkụ si echikwapụ. Kpọtụrụ maka bun nkọwa.
Nwụnye n'elu Isiokwu na Base
① Ọ bụrụ na eji a mgbodo mgbe arịọnụ bọl ịghasa nut na tebụl, fanye nut n'ime
mgbodo na nwa oge dokwaa ya.
② ibio isana ofu-n'akụkụ Support Unit na isi.
Na-eme otú ahụ, pịa table n'ebe ofu-n'akụkụ Support Unit na mmezi nke axial center, na
kpatụ table nke mere na ọ nwere ike kpamkpam njem.
● Ọ bụrụ na-eji ofu-n'akụkụ Support Unit dị ka akwụkwọ mgbe, nọrọ ná nchebe a nwechapụ n'etiti
bọl ịghasa nut na table ma ọ bụ n'ime ndị mgbodo mgbe na-eme mgbanwe.
● Ọ bụrụ na-eji tebụl ka akwụkwọ ebe, ka ukpụhọde ma site na iji shim (n'ihi na a
square ụdị Support Unit), ma ọ bụ ichebe a nwechapụ n'etiti elu elu nke aku
na n'ime elu nke-arịọnụ ngalaba (n'ihi na a gburugburu ụdị nkwado Unit).
③ pịa table n'ebe ofu-n'akụkụ Support Unit na mmezi nke axial center. Mee ukpụhọde
site reciprocating tebụl ọtụtụ ugboro nke na aku aga were were ofụri
ofụri ọrịa strok, na nwa oge isana Support Unit na isi.
Inyocha Izi Ezi na Ofụri Esịt tightening na Nkwado Unit
Mgbe ịlele ọsọ-nke na obi ụtọ ịghasa aro ọgwụgwụ na axial nwechapụ eji a Ịkpọ oku
nlele, n'ụzọ zuru ezu ikesiike na obi ụtọ ịghasa nut, aku mgbodo, na ofu na-n'akụkụ Support Unit na supported-
n'akụkụ Support Unit, na a ka.
Njikọ na Motor
① efego moto mgbodo na isi.
② Jikọọ moto na bọl ịghasa eji a njikọ.
Cheta na: Jide n'aka na-arịọnụ ziri ezi na-nọgidere na-enwe.
Deep uzo Ball agba , Brass Parts, Machinery Parts, Deep uzo Ball Iburu 6205 , 6207 Deep uzo Ball Iburu , Deep uzo Ball Iburu 6318 Ntn ,
Address: Mba 93, Pinggang Road, Matian Street, Guangming Shenzhen, China 518106
Basic chọrọ maka linear ndu imewe